Dhoobo Daareed oo beeniyey War laga baahiyey eedeyna u jeediyey Deni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 21 December 2019
Dhooba-dareed oo la waydiyey Barnaamijka dimuqraadiyada ee Puntland laga daahfuray ayaa sheegay in uu la yaabay Madaxwayne Deni oo suaal xildhibaan waydiiyey ku sigtay in uu dildilaaco xanaaq awgiis sida uu u xamili karo Dimuqraadiyad toosh laysku ifinayo isagoo madaxwaynaha ku eedeyey qofkii hadlaba in uu xirayo.
Siyaasi dhoobo dareed Muqdisho ugu waramay Universaltv wuxuu beeniyey in loo magacaabayo safiirka Soomaaliya Erateria isagoo tilmaamay in uusan qaban doonin shaqo aan ahayn sixitaanka Puntland hadii la Waayana la kala tashan doono.
Inta waraysigu socday Wuxuu dhowr jeer ku soo celceliyey in Puntland ka leexatay wadadii wada lahaansha iyo sharciyada balse mar la waydiyey in wada lahaanshu ku xiran yahay xilka qaadistiisa iyo in beeshiisu siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan Puntland ka tirsantahay wuxuu sheegay in siyaasiyiin dantooda eeganaya ay joogaan hadii goboladu tashadaana ay baaqi ku sii ahaan doonaan.
Dhooba-dareed wuxuu sheegay in uu ka mid yahay dadkii madaxwayne deni dhisay isla markaana codkiisa uu ku doortay balse koox yari ka dhaadhicisay in ay iyagu doorteen oo uu aaminay mudadii waraysigu socday wuxuu dhoor jeer dhaliilay koox uu sheegay in Aaran jaan la dhaho uu sheegay in ay dalkii afduubeen mar la waydiyey sida uu u arko xasaanad ka qaadkiisa wuxuu sheegay in uu la yaaban yahay ujeeda laga lahaa.
Wuxuu sheegay in Putland u afduubtahay xarig isu dhiib sadex xisbi oo hogaanka Putland isku badalayey mar wariyuhu waydiyey in uu sharaxaad ka bixiyo si dadku u fahmaan wuxuu sheegay in dadku garanayaan oo aan waligeedba cidkale Puntland aysan madaxwayne ka noqon.
Al-Shabaab oo sheegay in Hub uu Turkiga siiyey Ciidanka Dowladda ay qabsadeen
Soomaaliland oo Wafdi u soo dirtay Muqdisho